Waxaan aaminsanahay in qaabka afaraad ee McKnight uu ka caawin karo maalgashadayaasha inay gacan ka geystaan dhaqaalaha dhabta ah.
Waa qaab-dhismeed wax-qabad ah oo lagu kobcin karo ama hoos udhisan yahay iyada oo ku xidhan dhaqaalaha iyo ilaha aadanaha, waxayna caawin kartaa maal-gashiga saamaynta leh ee maal-gashiga ee dabacsan muruqyada dhammaan dherarkooda.
Mu'asasada McKnight waxay bixisaa in ka badan $100 milyan sanadkii si ay u taageerto ururada aan faa'iido doonka ahayn ee u shaqeeya bulsho ahaan, dhaqaale ahaan, iyo bulshooyin deegaan ahaan waara. Waxaan ku maalgelin doonnaa ugu yaraan $200 milyan maalgashi oo leh saameyn togan oo sarreeya. Oo waxaan helnaa fursado kale oo xiiso leh si aan uga faa'iidaysano $3 deeqdeena hadafkeena. Qiyaastii $1 $3 kasta oo aan maalgashanay waxay la jaan qaadaysaa hadafka McKnight.
Nidaamkeena waxaa loo abaabulaa afar dhibcood oo ah kooras:
Waxaanu nahay milkiilaha hantida oo malaayiin doolar ku bixinaya suuqyada dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay.
Macaamiisha Adeegyada Dhaqaalaha
Waxaanu macaamiil ka nahay alaab maaliyadeed iyo adeegyo oo kor u qaadi kara fekerka isku dhafan ee ku saabsan arrimaha deegaanka, bulshada, iyo maamulka shirkadaha (ESG) ee ka mid ah maamulayaasha hantida aan shaqaaleysiinayno.
Waxaan nahay saamileyaal shirkado ah oo u codeeya wakiillada shirkadda waxayna sare u qaadaan su'aalaha ku saabsan hababka ESG, istaraatiijiyada, iyo maaraynta khatarta.
Ka Qayb Qaadashada Suuqa
Waxaan nahay maalgeliye hay'ad leh oo la shaqeeya dadka kale si ay u helaan heshiisyo, abuuraan xaalado suuq wanaagsan, iyo wadaagaan guusha iyo guul darrooyinka la xiriira portfolioskeena.
Istaraatiijiyadda Feejignaanta leh
Maalgalintayada saamaynta leh waa inay si dhaw ula jaanqaadaan yoolalka labadan qaybood ee mudnaanta siin siinta: Cilmi-badeedka & Tamarta Midwest iyo dhisme beello loo wada dhan yahay oo loo wada dhan yahay ee gobolka Minnesota.
Marxaladan, waxaan maalgashi ka sameyneynaa Mareykanka oo keliya.
Caawimadeena saameynta siyaasadda maalgelinta, saameynta maalgelinta saamaynta waxaa hoggaamiya agaasimaha barnaamijka Elizabeth McGeveran. Go'aamada maalgelinta waxaa sameeya Guddiga Hagaajinta Miisaaniyada ee guddiga maamulka, oo ay ku jiraan saddex xubnood oo ka tirsan Guddiga Maalgashiga iyo hal agaasime oo dheeraad ah. Gudigani wuxuu go'aanka ugu dambeeya ee fikradaha maalgashiga ka dhigaya mid isku xirnaanta udhaxeeya Gudigeenna Maalgashiga ee isku xirnaanta dusha sare.
Gudoomiyaha, waa qayb ka mid ah Goldman Sachs Management Asset, waa bixiyaha adeegga aasaasiga ah, waxaanu kula talineynaa Hay'adda iyo qabashada taxadar ku saabsan maalgelinta dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay, maalgelinta tooska ah iyo maalgelinta barnaamijyada la xidhiidha barnaamijyada (PRI). Kooxda 'Imprint' ayaa sidoo kale u adeegta wadaad muhiim u ah McKnight. Waxaan sidoo kale la shaqeynaa aasaas kale iyo maalgashadayaasha hay'adaha si aan rasmi ahayn iyada oo loo marayo wada shaqeyn toos ah. Gaar ahaan, Shabakada Maalgashiga Khatarta Cimilada wuxuu ahaa kheyraad qiimo leh oo ku saabsan isbeddelka cimilada, siduu leeyahay CDP.
"Isbeddelka cimiladu waxa weeye in la yareeyo qiimaha macaashka McKnight. Iskudarida faham waqti dheer ah oo ku saabsan isbedelka cimilada - sababaha iyo xalliyadoodu - waxay qayb ka tahay ilaalinta dib u soo celinta dakhliga. "
Isha: Waddada Paris: Dhisidda Dhaqaale Low-Carbon leh Maalgelinta iyo Philanthropy